Ọnọdụ akụnụba na-emepe imeghe njem na Dubai, Egypt, Lebanon, Qatar, Tunisia n'agbanyeghị ọrịa na-efe efe?
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » News » Ọnọdụ akụnụba na-emepe imeghe njem na Dubai, Egypt, Lebanon, Qatar, Tunisia n'agbanyeghị ọrịa na-efe efe?
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Na -agbasa n'Ijipt • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Israel Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ kacha ọhụrụ na Lebanon • News • Akụkọ na -agbasa ozi Qatar • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Onyinye Seychelles - Dubai_0
Mba Arab, ọkachasị ndị dabere kpamkpam na njem nleta dịka Dubai, Egypt, ye Lebanon, na-anabatakwa ụzọ dị iche iche mgbe ha na-atọghe mmechi ha tinyere n’ókèala ha na ọdụ ụgbọ elu ha iji lụso COVID-19 ọgụ.
Dubai, nke kachasị n'ọnụ ọgụgụ n'ime alaeze asaa ahụ mejupụtara United Arab Emirates, meghere ọnụ ụzọ ya nye ndị ọbịa na July 7. Ntugharị ahụ bịara n'agbanyeghị mkpebi UAE iji gbochie ndị bi na ya ịgagharị na mba ọzọ ma gbochie ndị mba ọzọ ịbanye na mpaghara ya kpamkpam.
Dubai bu ebe obibi alaeze, ụgbọ elu ụgbọ elu kasị ukwuu na Middle East, na ụgbọelu nke anọ kasị ukwuu n'ụwa site na ndokwa njem-kilomita. Emirates eweputala ọtụtụ usoro ahụike na nchekwa maka ibugharị ụgbọ elu ndị ọzọ emebere.
A ga-enye ndị njem ọ bụla ihe nlere maka ịdị ọcha mgbe ịlele na ọdụ ụgbọ elu mba Dubai na ụgbọ elu na Dubai. Ngwa ndị ahụ nwere masks, gloves, antibacterial wipes, na aka sanitizer.
Uwe na nkpuchi bụzi ihe dị mkpa maka ndị ahịa na ndị ọrụ ọ bụla na ọdụ ụgbọ elu dị na Dubai, ebe naanị masks ka enyere iwu na ụgbọ elu Emirates.
Mgbe ị rutere n’ọdụ ụgbọ elu, igwe nyocha ọkụ na mpaghara dị iche iche na-enyocha ogo nke ndị njem na ndị ọrụ niile. Tụkwasị na nke ahụ, e debere ihe ngosi anụ ahụ na ala na ebe echere iji nyere ndị njem aka ịnọgide na-adị ogologo oge dị mkpa na nbanye, mbata, mbata, na ebe mbufe.
Mohammed Yasin, onye isi ulo oru atumatu na Al Dhabi Capital, gwara ndi Media Line na onwere nsogbu iji mee ka imeghari uzo ndi njem nleta na ile obia.
O kwuru na nke a ga - eduga na ịmalite ọrụ ọzọ site na họtelu, ọdụ ụgbọ elu na ụlọ ahịa, nke bụ akụkụ dị oke mkpa nke akụ na ụba Dubai.
Yasin kwuru na tupu ọrịa ahụ a na-efe efe, njem na mpaghara ndị metụtara ya ruru "ihe dịka 40%" nke GDP Emirate.
Ọ na-ekwusi ike na Dubai nwere nsogbu coronavirus na-achịkwa, ngalaba ahụike ya nwere ikike ịgwọ ndị ọrịa.
“Emeghere ụlọ ọgwụ dị iche iche iji mee ka ikike nke ahụike nwee ike, na mgbe ọnụọgụ nke ọrịa malitere ịbelata, ụfọdụ ụlọ ọgwụ ndị a mechiri. Ya mere, ọ bịara bụrụ ihe dị mkpa imeghe mpaghara ndị njem, “ka ọ na-akọwa.
Mkpebi ahụ metụtara nyocha na nguzozi n'etiti ihe egwu na uru.
Ọ na-ekwu, sị, "Ugbu a, uru nke uru ahụ karịa ihe egwu dị na ya.
Na July 1, Egypt weghachitere ọdụ ụgbọ elu ya nke mbụ kemgbe March. N'agbanyeghi na onwa June huru onodu ohuru na onwu kariri onwa ano gara aga, gomenti kpebiri ikwusi otutu ihe ewepuru iji gbochie oria a.
EgyptAir ekwuputala na ndị njem kwesịrị iyi ihu oge niile, bido mgbe ha banyere n'ọdụ ụgbọ elu, ebe ndị ọrụ niile ga-eyi akụrụngwa nchedo onwe ha (PPE), gụnyere ọta ihu, ma na-enyocha ya mgbe niile maka ọnọdụ okpomọkụ.
A ga-atụlekwa okpomọkụ ndị njem. Enwere akwụkwọ mmado sara mbara n’elu ala iji nyere ndị njem aka ịnọ ebe dị anya site na ibe ha.
EgyptAir weghachitere ihe karịrị ndị Ijipt 5,000 na mba ofesi na nso nso a, ndị njem na-ahụ maka njem nlegharị anya meghere ihe ncheta, gụnyere Pyramid nke Giza na Museum Museum na Cairo.
Mohammed Farhat, onye nyocha na Al-Ahram Center for Strategic Studies, gwara ndị Media Line na mkpebi gọọmentị ka a tụlere nke ọma maka mmebi mmebi nke mmechi.
"Ọtụtụ mba Arab na mba ụwa emeela mkpebi yiri nke ahụ n'ihi na anyị enweghị ike ịnọ n'okpuru mmechi - ọ bụ ọnọdụ pụrụ iche n'ihi ọnọdụ pụrụ iche," ka ọ na-ekwu.
Mkpebi ndị Egypt bụ akụkụ nke omume ụwa niile iji mee ka akụ na ụba meghee ka ndị mmadụ nwee ike ịga n'ihu ịkwado ezinụlọ ha, ọ na-agbakwụnye.
“Globalkọ ego [zuru ụwa ọnụ] maka ọnọdụ ndị pụrụ iche pere mpe,” ka ọ na-ekwu. "Mba ọ bụla nwere ego iji gbochie ọnwa ole ha si enweta ego na mmefu ụlọ n'ụlọ n'ọnọdụ ndị pụrụ iche, mana ike agwụghị ha maka otu nsogbu."
Ọ dị ezigbo mkpa, ọ gara n'ihu, iji chekwaa nchekwa mba ụwa maka ọgba aghara n'ọdịnihu.
“Ọbụna mba ndị nwere nnukwu ego etinyeghị ha n'ihe ize ndụ, ebe anyị enweghị ike iyuzucha akụ ndị a zuru ụwa ọnụ maka otu mmechi n'ihi coronavirus. Mba ga-enwerịrị maka nsogbu ndị ọzọ dị mkpa ngwa ngwa, “ka ọ na-ekwu.
Beirut's Rafik Hariri International Airport meghere maka ụgbọ elu na 10% nke ikike na July 1, yana usoro nchekwa na ịdị ọcha siri ike.
Facemasks bụ iwu maka ndị njem na ikuku n'ime ọnụ na ụgbọ elu ahụ. A choro ka ndi njem nile weta otutu ihe nkpuchi ma gbanwee ha kwa awa anọ. Ha aghaghi iweta aka ha nke oma.
Jassem Ajaka, bụ prọfesọ nke akụnụba na Mahadum Lebanọn, chere na mkpebi imeghe ọdụ ụgbọ elu ahụ dị mkpa ọ bụghị n'ihi na ọ ga-enyere ngalaba ndị njem aka, kama ọ bụ n'ihi na ọtụtụ ego mba ofesi ga-aba mba ahụ.
“Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị butere COVID-19 si na ọdụ ụgbọ elu na-abanye Lebanọn. Ya mere, imechi ọdụ ụgbọ elu ga-abụ ihe kacha dịrị nchebe, mana mgbe ihe na-efu kwa ụbọchị ihe ruru nde $ 30 kwa ụbọchị [na njem ndị njem njem], enwere nnukwu nsogbu, ”ka ọ gwara The Media Line.
Lebanọn na-ata ahụhụ site na nsogbu ọgbaghara ego dollar, nke bụ otu n'ime ihe na-akpata ngagharị n'okporo ámá na-aga n'ihu na mba ahụ. Tupu ịmaliteghachi ya, ọdụ ụgbọ elu ahụ ghere oghe maka ndị si mba ọzọ bụ ndị wetara dollar dị mkpa iji kwado paụnd Lebanọn ma kwụọ ụgwọ maka mbubata nri.
Ọ sịrị: “Lebanọn enwekwaghị ike ịnwe ego mba ofesi. "N'agbanyeghị mmụba nke ikpe coronavirus, ego dị mkpa maka mba a."
Na Jọdan, gọọmentị kwupụtara n’izu a na mba ahụ ga-amalite ịmepe ókèala ya na ọdụ ụgbọ elu ya maka ndị njem mba ụwa n’August mgbe ọnwa anọ mechiri.
N’ịgbalị ibelata ihe egwu a, a ga-enwe ndepụta mba ndị akwadoro. Ọzọkwa, ndị njem na-abata ga-agafe ule coronavirus ma ọ dịkarịa ala awa 72 tupu ha apụ ma were nnwale nke abụọ mgbe ha rutere.
A na-ahụta alaeze dị ka ebe nchekwa, nyere gọọmentị ọfụma na ịchịkwa mgbasa nke nje a.
Mazen Irshaid, onye ọkachamara ego nke Amman na-ede maka ọtụtụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi Arab, na-ekwu na njem dị mkpa n'ihi na ọ gụrụ 10% nke nnukwu ngwaahịa ụlọ Jọdan tupu ọrịa ahụ.
"Mgbe mpaghara ndị njem na-agbake, ọ ga-atụgharị uche n'ụzọ ziri ezi na mpaghara ndị ọzọ na-enweghị njikọ na ya, dịka njem, ile ọbịa, nri nri na ngalaba ndị ọzọ na-akpata ego," ka ọ gwara The Media Line.
O kwuru na ihe karịrị otu nde ndị njem gara Jordan n’afọ gara aga.
"Dabere na nkwupụta ndị gọọmentị na-adịbeghị anya, imeghe ga-abụ nwayọ nwayọ na site na ụfọdụ mba ndị nwere obere nsogbu, yana dịka njirisi steeti siri kwuo," ka Irshaid na-ekwu.
Ngalaba njem nleta ahụgoro nnukwu uto na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọkachasị mgbe enwere ọnọdụ nkwụsi ike n'ihe banyere obodo ndị agbata obi Syria na Iraq, ọ na-ekwu.
Ọ gbakwụnyere, sị, "Ọrịa coronavirus laghachiri anyị n'otu akụkụ," ka ọ na-agbakwụnye. “Ọ bụghị naanị njem nleta na ihe ndị metụtara ya metụtara ya n'ụzọ na-adịghị mma, kamakwa ọ metụtara akụ na ụba n'ozuzu ya."
Prọfesọ Yaniv Poria, onye isi oche nke Ngalaba Hotel na Njem Nleta na Mahadum Ben-Gurion nke Negev dị na Israel, gwara Usoro Media na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eme njem na mpaghara ahụ enweela nnukwu nsogbu na ego ha na-enweta na-akpata ya, n'ihi ya a ga-amanye ha ịwelite ọnụ ahịa nke ukwuu.
“Ikwesiri ilebara anya na ụlọ ọrụ njem anaghị eme ego n’ire naanị tiketi ahụ, mana site n’ire ngwugwu ezumike na họtel dịka akụkụ nke azụmahịa,” ka o kwuru. "M n'aka na mgbe coronavirus okokụre, ndị ahịa ga-ọbụna karịa."
Companieslọ ọrụ njem ga-amalite iche echiche na mpụga igbe iji chọta ụzọ iji nọrọ na azụmaahịa, Poria na-ekwu.
“Ikekwe ha kwesịrị ime atụmatụ maka ibu na ndị njem n'otu ụgbọelu. Nọmalị anyị nwere ụgbọ elu maka ibu na ụgbọ elu maka ndị njem. Ma eleghị anya, anyị kwesịrị ịrara ngalaba maka ibu na ndị ọzọ na ngalaba nke otu ụgbọelu maka njem, ”o kwuru.
"Ha kwesịrị ịmepụta ihe iji mee ka ọ baa uru," ka ọ gbakwụnyere.
Poria kwuru na ụgbọ elu kwesịrị ịrapara n'ụkpụrụ na usoro iji wee nwee ogo ọrụ.
Ọ kọwara, sị: "N'oge gara aga, njem bụ ahụmịhe na ọhụụ nke ndị mmadụ na-atụ anya ya n'atụmanya," “Ugbu a ọ ga-adị obere ma pere mpe otu ahụ. Ọrụ ahụ agaghị abụ otu. Ndị njem ga-enwe nnukwu obi abụọ ọ bụghị naanị maka etu ọrụ si arụ ọrụ, kama banyere etu ụgbọelu ga-adị ọcha, ma ndị njem ndị ọzọ. ”
Insurance ga-abụ ihe ọzọ dị mkpa mgbe ị na-ekpebi ma ị ga-efe efe na nke ụgbọ elu, Poria na-ekwu, ọkachasị ebe ọ bụ na a na-akagbu ọtụtụ ụgbọ elu n'oge a, ọtụtụ ndị ahịa na-enwekwa nsogbu ịghaghachi ego ha.
“Companieslọ ọrụ ndị nwere ego siri ike ma nwee ike… kwụọ ndị njem ụgwọ ọ bụrụ na akagbuo ụgbọ elu ha bụ ụlọ ọrụ ndị ga-aga nke ọma,” ka o kwuru. "N'ịga n'ihu, okwu banyere mkpuchi ụgbọ elu na ịkwụ ụgwọ ga - arụ ọrụ dị oke mkpa."
Ntụkwasị obi ga-akachasịkwa mkpa maka ọdịnihu nke njem, ebe ndị mmadụ ga-amalite ịhọrọ ụgbọ elu dabere na etu ha siri chee na ọ na-agbaso usoro nchekwa.
O kwuru, sị, “Ọtụtụ ga - ahọrọ iji naanị ụgbọ elu na - ekpe ikpe na ha ga - agbasi ike n’ịhụ na ahụike na nchekwa nke ndị ọrụ ha na ndị njem.
Enwekwara ike inwe oge ụgbọ elu ga-efe naanị ma ọ bụrụ na ọnụọgụ ndị njem zuru ezu.
"N'oge gara aga, ọtụtụ ndị kpebiri ime njem otu ụbọchị ma ọ bụ abụọ tupu mgbe ahụ, mana nke a agaghị abụ ikpe ọzọ," ka Poria kwuru.
"Ndị mmadụ ga-eme atụmatụ ogologo oge tupu ọ gaghị adị mfe," ka ọ gara n'ihu. “Ọ ga-esikwu ike karị. Ndi mmadu gha enye asambodo na ha enweghi oria. Ha ga-edejupụta ọtụtụ fọm tupu ha agawa, ya mere, ọ gaghị abụ mkpebi dị mfe. ”
Hefọdụ ndị njem, ka o kwenyere, ga-efe naanị mgbe ọ bụla ha kwesịrị ịnya.
Mbugharị na-eme ka anyị mee ihe anyị na-echeghị na anyị ga-emebu. Ọbụna na agụmakwụkwọ ụwa, ọ bụrụ na ịnwere ike inwe ogbako site na Mbugharị, anyị jidere ya site na Mbugharị kama ịga njem, ”ka o kwuru. Ndị enyi na ndị ikwu na-ejegharị maka agbamakwụkwọ, nleta ma ọ bụ oriri ọ bụla ga-abụ obere ihe karịa ka ọ dị na mbụ. ”
Kata akwupụtara na July 21 na malite na August 1, a ga-ahapụ ụmụ amaala na ndị bi na-adịgide adịgide ka ha gaa na mpụga mba ahụ wee laghachi mgbe ọ bụla ha chọrọ.
Ndị ga-esi na 40 "mba ndị nwere obere nsogbu" ga-anwale ule COVID-19 mgbe ha rutere n'ọdụ ụgbọ elu ma bịanye aka na ntinye onwe gị iche ruo otu izu.
Mgbe ụbọchị asaa gachara, ha ga-anwale ule nke abụọ. Ọ bụrụ na-adịghị mma, ha nwere ike ịpụpụ iche; ọ bụrụ na ọ dị mma, a ga-ebufe ha n'ụlọ ọrụ gọọmentị maka iche.
Ndị njem na-esite na mba ndị na-anọghị na ndepụta nchekwa ga-enweta "asambodo na-enweghị nje" site na ụlọ ọrụ nnwale COVID-19 a nabatara karịa elekere 48 tupu ụgbọ elu ha wee rube isi n'iwu kwarantaini mgbe ha rutere.
Ke ufọt ufọt June, na World Tourism Organisation kwuru Tunisia ebe njem nleta na-adịghị ize ndụ, na June 27, mba North Africa meghere ókèala ya maka ndị njem nleta.
Authoritylọ ọrụ na-ahụ maka ọdụ ụgbọ elu nke Israel kwupụtara na July 20 na ndị ọbịa si mba ọzọ, na-ewepu mmadụ ole na ole, ga-egbochi ịbanye mba ahụ ma ọ dịkarịa ala Septemba 1. E nwere akụkọ na mba ahụ ga-aga n'ihu igbochi ndị mbata mbata na Nọvemba.
nke DIMA ABUMARIA, MediaLine